Abantu abangagonywanga bavalwe kwiindawo zikawonke-wonke eOstriya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba » Abantu abangagonywanga bavalwe kwiindawo zikawonke-wonke eOstriya
Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ingqonyela yaseOstriya uAlexander Schallenberg
Ukuvalwa kokungena kuya kuqalisa kwiveki ezayo kwaye kuya kusebenza kwiikhefi, iibhari, iindawo zokutyela, iithiyetha, iindawo zokulala, iihotele, abalungisi beenwele kunye nawo nawuphi na umcimbi obandakanya abantu abangaphezu kwama-25.
Urhulumente wase-Austrian uthi ulindele ukuba amanani amatsha e-COVID-19 afikelele phezulu kwiiveki ezizayo.
Bonke abantu abangagonywanga baya kuthintelwa ukuba bangene kuluhlu olude lweendawo zikawonke-wonke, kubandakanya iibhari, iikhefi kunye neehotele.
Kuya kubakho ixesha lotshintsho lweeveki ezine, apho abo bafumene idosi yabo yokuqala yesitofu sokugonya kwaye banokubonelela ngovavanyo lwe-PCR olunegative baya kukhululwa kwimigaqo.
Ecaphula i-spike ekhawulezileyo engalindelekanga kumatyala amatsha e-COVID-19, uChancellor wase-Austrian u-Alexander Schallenberg ubhengeze ukuba bonke abantu abangagonywanga kungekudala baya kuthintelwa ukuba bangene kuluhlu olude lweendawo zikawonke-wonke, phakathi kwazo iibhari, iindawo zokutyela, iithiyetha kunye neehotele.
"Indaleko ikhethekile kwaye indawo yokuhlala kwiibhedi zokhathalelo iyanda ngokukhawuleza kunokuba besilindele," utshilo uSchallenberg xa ebhengeza izithintelo ezintsha.
NgokukaSchallenberg, ukuvalwa kokungena kuya kuqala kwiveki ezayo kwaye kuya kusebenza kwiivenkile zokutyela, iibhari, iindawo zokutyela, iithiyetha, iindawo zokulala, iihotele, abalungisi beenwele kunye nawo nawuphi na umcimbi obandakanya abantu abangaphezu kwama-25.
Izithintelo ezintsha zinokuchaphazela inxalenye enkulu ye Ostriya Inani labantu, kunye ne-36% yabahlali bayo abakagonyelwa ngokupheleleyo intsholongwane ye-COVID-19.
Iimeko ezitsha zemihla ngemihla ze-COVID-19 zibethe kwi-9,388 izolo, ukuya kutsho Ostriya Ingxelo ye-9,586 erekhodiweyo kulo nyaka uphelileyo, kwaye urhulumente uthi ulindele ukuba amanani afikelele phezulu kwiiveki ezizayo.
Ngelixa amanyathelo eza kuqala ukusebenza ngoMvulo, uSchallenberg uthe kuya kubakho ixesha lotshintsho leeveki ezine, apho abo bafumene ithamo labo lokuqala lokugonya kwaye banokubonelela ngovavanyo lwe-PCR olungalunganga baya kukhululwa kwimithetho. Emva kwezo veki zine, nangona kunjalo, uninzi lweendawo zikawonke-wonke ziya kuvula iingcango zabo kuphela kwabo bagonywe ngokupheleleyo okanye abo basandula ukuchacha kusulelo lwe-COVID-19.
Izithintelo ezitsha, ezinemithetho yesipili ebekwe kwidolophu elikomkhulu laseVienna ekuqaleni kwale veki, ayisebenzi kubasebenzi kumaziko, kuphela kubaxhasi, njengoko i-chancellor yathi "Omnye ngumsebenzi wokuzonwabisa owenziwe ngokuzithandela - akukho mntu undinyanzelayo ukuba ndiye. icinema okanye indawo yokutyela – enye yindawo yam yokusebenza.”
Urhulumente okhokelwa ngumgaqo-nkqubo uye wachaza izithintelo eziqatha ngakumbi kubantu abangagonywanga ukuba iibhedi ezingama-600 okanye ngaphezulu zase-Austrian zizaliswe ngabaguli be-COVID-19, bazibeka kwindawo evaliweyo. Ukusukela ngoLwesine, elo nani limi kuma-352, kodwa liye lenyuka ngesantya esingaphezulu kwe-10 ngosuku.
Ostriya Ikude nelizwe lokuqala laseYurophu ukuphumeza ukuvalwa okufanayo kokungena, kunye neFrance ne-Italiya besenza ezabo iinkqubo zokupasa isitofu sokugonya sedijithali ukunyanzelisa amanyathelo.
Jemani , nayo, ngoku idibanisa ingcamango efanayo. Njengoko amazwe aseJamani aphumeza ukuvalwa okongeziweyo kunye neemfuno zokugonya, uChancellor ophumayo u-Angela Merkel wacinezela "izithintelo eziqatha" kubantu abangagonyelwanga kulo lonke elaseJamani ekuqaleni kwale veki.